Izitifiketi Zethu - IHengshui Hongzhu Medical Technology Co, Ltd.
Isisetshenziswa se-Cervical Neck Traction
I-Smart Posture Corrector
Umshini Wesihlalo Somoya Ohlaselwayo
Medical Air Matress
Semukela ngemfudumalo ukuvakasha kwakho futhi sibheke ukusebenzisana nani maduze.
Incwadi eyodwa yabo bonke abangane bethu-beluleka ...
Bangani Abathandekayo, Manje kunanini ngaphambili, kulesi sikhathi sesidingo, ukusekela omunye nomunye sekuyinto yethu. Ngokubambisana siqhubekela phambili ngokubekezela nethemba ngokubhekana nokungaqiniseki. Njengoba sisebenza kanzima ukuvikela i-h ...
Imikhiqizo emisha efika-posture corrector
Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezinhle eyodwa kithi kanye nawe, sithuthukise isitayela sokumiswa esisha se-posture corrector-smart posture. Izithombe zesethenjwa sakho njenge, ...
Ungayikhetha kanjani i-hemiplegic Walker
Ngokwezibalo, njalo ngonyaka kuba neziguli ezihlaselwa isiguli ezi-1,2-1,8 million, ezingama-400000-800000 ngonyaka zokufa kwabantu kanye nezinga lokukhubazeka elingu-86,5%. Ngokwezibalo zabanye abafundi, phakathi kweziguli ezisindayo ezinesifo, ...
Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezinhle eyodwa kithi kanye nawe, sithuthukise umakhi omusha wesitayela sokumiswa esisha. Izithombe zesethenjwa sakho njenge, ...
Ukubambisana ngokubambisana nefektri yeRUKANG ...
Jabulani ngemfudumalo ukusebenzisana kweHongzhu yezokwelapha noRukang ukusayina izivumelwano ezikhiqizweni zabakhubazekile. Ukuhola okuvela kuzo zombili izinhlaka, uMnu Yang noMnu Lv baya kuwo futhi bathembisa ukuthi bazozama konke okusemandleni ukusekela ...